ဂယ်ဂဒေါ့ - ဝီကီပီးဒီးယား
Gadot in 2019
(1985-04-30) ၃၀ ဧပြီ၊ ၁၉၈၅ (အသက် ၃၇)
၁၇၈ cm (၅ ft ၁၀ in)
ဂယ်ဂဒေါ့ (အင်္ဂလိပ်: Gal Gadot-Varsano) (/ɡəˈdɒt/; ဟီဘရူး: גל גדות‎ [ˈɡal ɡaˈdot]; (၃၀ ဧပြီ ၁၉၈၅ မွေးဖွား) သည် အစ္စရေးနိုင်ငံ မှ အလှမယ်နှင့် ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်သည်။ အစ္စရေးနိုင်ငံတွင် မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့ပြီး အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်၌ Miss Israel (၂၀၀၄) ကို ဆွတ်ခူးခဲ့သည်။ သူမသည် အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ရေးတွင် တိုက်ခိုက်ရေးနည်းပြအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက် IDC Herzliya ကောလိပ်၌ မော်ဒယ်နှင့် သရုပ်ဆောင်ပညာရပ်များကို လေ့လာဆည်းပူးခဲ့သည်။ ဂယ်ဂဒေါ့သည် The Fast and the Furious ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲတွင် Gisele Yashar အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူမသည် Wonder Woman ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းဖြင့် လူသိများလာခဲ့သည်။ ဂဒေါ့သည် Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League စသည့်ရုပ်ရှင်များ၌လည်း Wonder Woman အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
၃ မော်ဒယ်နှင့် အလှမယ် ဘဝ
၄ သရုပ်ဆောင် ဘဝ
၅ ကိုယ်ပိုင် ဘဝ
ဂဲ ဂဒေါ့အား ပီတာ့တိတ်ဗာမြို့တွင် မွေးပြီး အဆိုပါမြို့အနီးရှိ ရာ့ဟာရင်မြို့ ၌ ကြီးပြင်းသည်။ ဟီဘရူးဘာသာစကားဖြင့် ဂဲ ဆိုသည်မှာ လှိုင်းဟု ဆိုလိုပြီး ဂဒေါ့မှာ မြစ်ကမ်းဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ဖခင် မိုက်ကယ် ဂဒေါ့မှ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မိခင်ဖြစ်သူ အိုင်ရစ် (Irit) မှာ ဆရာမတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ မိဘနှစ်ဦးစလုံးမှာ အစ္စရေးဖွားများ ဖြစ်သည်။ ဂဒေါ့၌ ဒါနာအမည်ရှိ ညီမတစ်ဦး ရှိသည်။
အထက်တန်းကျောင်းသူဘဝက ဇီဝဗေဒအား အဓိကဘာသာအဖြစ် ယူသည်။ သူမ၏အရပ်မြင့်မှုကြောင့် ဘက်စကတ်ဘောအား ကောင်းစွာကစားနိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။  ဆယ်ကျော်သက်ဘဝ၏ ပထမဆုံးအလုပ်အကိုင်မှာ ဘာဂါကင်း၌ ကလေးထိန်းခြင်း ဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်သော် ဟာဇယ်လီယာရှိ အိုင်ဒီစီကျောင်းတွင် ဥပဒေနှင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ဘာသာရပ်များကို ဆည်းပူးသည်။
အစ္စရေးကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တွင် တိုက်ခိုက်ရေးနည်းပြအဖြစ် နှစ်နှစ်ကြာ အမှုထမ်းသည်။ ဤအတွေ့အကြုံများက Fast & Furious ဇာတ်ကားအား သရုပ်ဆောင်ရာတွင် အရေးပါကြောင်း ဖွင့်ဟဖူးသည်။
မော်ဒယ်နှင့် အလှမယ် ဘဝ[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အစ္စရေးအလှမယ် အဖြစ် သရဖူဆောင်းသည်။ အီကွေဒေါသို့ သွားရောက်ကာ စကြာဝဋ္ဌာအလှမယ် အဖြစ် သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော်လည်း ဆုရခြင်း မရှိပေ။
၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် Maxim မဂ္ဂဇင်းမှ "အစ္စရေးတပ်မှ စစ်သမီးများ" ​ခေါင်းစီးဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဂဒေါ့၏ပုံကို အဆိုပါအထူးထုတ်မဂ္ဂဇင်းအတွက်ပြုလုပ်သော ပါတီသို့ဖိတ်ကြားစာတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ၎င်းပုံကို နယူးယောက်ပို့စ် သတင်းစာ၏ မျက်နှာဖုံးအဖြစ်လည်း ဖော်ပြခံရသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အစ္စရေး၏ နာမည်အကြီးဆုံးအဝတ်အထည်တံဆိပ် ကတ်စထရိုအတွက် ရှေ့ထွက်မော်ဒယ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အစ္စရေးအချစ်ဇာတ်ကား Bubot (မြန်မာလို အရုပ်များ) တွင် ပါဝင်ကာ သရုပ်ဆောင် ဘဝ စတင်သည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဗန် ဒီဇယ် နှင့် ပေါလ် ဝေါကာ တို့ အဓိကပါဝင်သည့် Fast & Furious ဇာတ်ကားတွင် ဂီစလီ ယာရှာ အဖြစ် သရုပ်ဆောင်သည်။
တွမ် ခရုစ် နှင့် ကင်မရွန်း ဒီရက် တို့ အဓိကသရုပ်ဆောင်သည့် ၂၀၁၀ ထုတ် Knight and Day ဇာတ်ကားတွင် တွမ် ခရုစ်၏ ရန်သူ့လက်ထောက် နာအိုမီ နေရာမှ ပါဝင်သည်။ Date Night ဇာတ်ကား၌လည်း မာ့ခ် ဝဲလ်ဘာ့ ၏ အစ္စရေး ရည်းစား နာတာညာ နေရာ၌ သရုပ်ဆောင်သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် Fast & Furious ဇာတ်ကားတွဲမှ Fast Five ဇာတ်ကားတွင် ပြန်လည် ပါဝင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အဆိုပါဇာတ်ကားတွဲမှ Fast Fix ဇာတ်ကား၌ ပါဝင်ခွင့် ရပြန်သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် စူပါဟီးရိုးဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်သည့် Batman v Superman: Dawn of Justice ၌ Wonder Woman အဖြစ် ပါဝင်သည်။ အဆိုပါဇာတ်ရုပ်အတွက် ဓားခုတ်နည်း၊ ကန်ကျောက်နည်းများအပြင် ဂျူဂျစ်ဆု၊ ကွန်ဖူးကဲ့သို့ ကိုယ်ခံပညာများကိုပါ လေ့လာခဲ့ရသည်။ ကိတ် ဝင်းစလက် နှင့် အာရွန် ပေါလ် တို့ ပါဝင်ထားသည့် Triple9အမည်ရှိ အသတ်အပုတ်ဇာတ်ကားတွင် ဇာတ်ရန် အယ်လီနာနေရာမှ သရုပ်ဆောင်ခဲ့သေးသည်။ Criminal အမည်ရှိ ဇာတ်ကားတွင်လည်း ရိုင်ယန် ရေးနော့ ၏ ဇနီးနေရာမှ ပါဝင်ခဲ့သေးသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် လူကြိုက်များသည့် သူမ၏ဇာတ်ရုပ် Wonder Woman အား ဇာတ်ကားအဖြစ် ဇာတ်ကြောင်းပြန် သရုပ်ဖော်သည်။ Justice League ဇာတ်ကားတွင် ထည့်သွင်းထားသည့် Wonder Woman နေရာမှလည်း ပါဝင်သည်။
ရုပ်ရှင်အနုပညာအတတ်ပညာအကယ်ဒမီ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်လည်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ကမ်းလှမ်းခံရသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အစ္စရေး အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် ယာရွန် ဗာဆာနိုနှင့် လက်ထပ်သည်။ အယ်မာ (၂၀၁၁) နှင့် မာယာ (၂၀၁၇) ဟူသော သမီးနှစ်ဦ: ရှိသည်။ တဲလ် အာဗစ်မြို့တွင် ဟိုတယ်တစ်လုံး ပိုင်ဆိုင်သော်လည်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ရိုမန် အေဗရာမိုဗစ် အား ဒေါ်လာ ၂၆ သန်းဖြင့် ရောင်းချထားသည်။
↑ Kadmi၊ Sivan။ "גל גדות" (in he)၊ Ynet၊ 1 April 2010။
↑ גל גדות על פרשת אופק בוכריס: "איפה הצדק?"။
↑ Scott၊ Becky (30 May 2017)။ Have You Been Pronouncing Gal Gadot Wrong?။ The Forward။
↑ IMAX (15 May 2017)။ Wonder Woman: Gal Gadot and Chris Pine။
↑ Gal Gadot။ AllMovie.com။ 20 January 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Gal Gadot Kicks Ass။ GQ Magazine။ 15 November 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Fleming၊ Mike (4 December 2013)။ Emerging Star Gal Gadot Set For Wonder Woman In 'Batman Vs. Superman'။ Deadline.com။4December 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Gal Gadot to Play Wonder Woman in 'Batman vs. Superman'"၊4December 2013။4December 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Gal Gadot’s Family:5Fast Facts You Need to Know | Heavy.com
↑ Chatting With 'Fast Five' Star Gal Gadot – The Forward။ 18 April 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Chosen Ones: Israeli Defense Forces - Maxim
↑ Open Road Acquires Domestic On ‘Triple 9’; Michael B. Jordan, Aaron Paul, Gal Gadot, Michael Pena Join Killer Cast | Deadline
↑ Gal Gadot cast as Wonder Woman: Comics world reacts on Twitter | Hero Complex – movies, comics, pop culture – Los Angeles Times
↑ Motion picture academy opens its doors to 774 new members as push for diversity continues
↑ Gal Gadot on Twitter: "And then we were four...She is here, Maya. I feel so complete blessed and thankful for all the Wonders in my life #family #newborn #grateful… https://t....
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂယ်ဂဒေါ့&oldid=623442" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၁:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။